N’ụbọchị Satọdee, abalị 21 nke ọnwa Ọkụtoba, ịhe karịrị mmadụ 450,000 gbakọrọ n’ogige Barcelona Centre n’obodo Madrid. Ha pụtara ịme ngagharị ịwe megide mkpebi ahụ gọọmenti mba Spen mere maka ịweghara ọchịchị mpaghara Katalonịa ahụ chọrọ isi na Spen kewara.
Ọtụtụ ndị ahụ na-eme ngagharị iwe jicha flagụ Katalonịa, nke a na-akpọ Estelada n’asụsụ spanishi.
Ndị uwe ojii na ndị ọlụ nchekwa nke mba Spen ji ụgbọelu helịkọpta na-efeghara n’ebe niile ahụ a na-eme ngagharị iwe.
Ụfọdụ ndị ahụ na-eme ngagharị iwe na-ekwu n’olu ike na-asị na ha ejighị ụjọ chaa chaa. Ịtụ egwu abụghị maka hanwa. Ha ga-aga n’ihu n’ịkpọ oku referendum ahụ ha na-akpọ ka Katalonịa si na Spen kewara, wụrụ mba nke aka ya, ma nọkwara onwe ya.